XOG CULUS : Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Kenya oo ku Dhawaaqay Hadal ka yaabiyay Bulshada Soomaliya iyo Shacabka Uganda Akhri… – Kismaayo24 News Agency
XOG CULUS : Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Kenya oo ku Dhawaaqay Hadal ka yaabiyay Bulshada Soomaliya iyo Shacabka Uganda Akhri…
by admin 19th March 2016 19th March 2016 014
Kulankii Xubnaha Baarlamaanka Dalka Kenya ayaa looga hadlay Muranka Kenya iyo Uganda u dhaxeeya ee la xiriira Lahaanshiyaha Jasiiradda Migingo ee ka tirsan Harada Victoria.
Arrintan,waxaa ay soo baxday kadib markii Booliska Uganda ee jooga Jaziiraddaasi ay Xabsiga dhigeen Xubno ka socday Guddiga doorashooyinka Kenya oo halkaa u tagay in ay doorashooyinka Qaran u diiwaan geliyaan dadka Kenyaanka ah eek u nool Jaziiraddaasi,Khamiistii la soo dhaafay.
Xildhibaan Jakoyo Midiwo, oo ka soo jeeda Galbeedka Kenya kuna jira Baarlamaanka ayaa soo jeediyay in haddii xal lagu gaari waayay diblomaasiyadda,Kenya u furan tahay in ay Fara gelin ku sameyso Uganda.
Jakoyo Midiwo,waxaa uu sheegay in Kenya ay Soomaaliya u fara gelisay ilaalada amaankeeda,sidaa darteedna aysan Uganda uga duwaneyn Soomaaliya,loona baahan yahay in Dowladda Kenya ay talaabo ka qaaddo Dalka Uganda.
Inta lu jiray Doodda Baarlamaanka Xildhibaan Jakoyo Midiwo,waxaa uu Uganda ku eedeeyay I ay tahay Waddan Gardarro badan, Qatar ku ah Kenya iyo madaxbanaanideeda,waxaana uu ugu baaqay Dowladda in ay isu diyaariso talaabadii ay ka qaadi lahayd Uganda.
“Haddii Dowladdu aysan awoodin in xal diblomaasiyadeed ku difaacdo Dalkeenna,haddaba aanu galno dagaal toos ah oo aan ku difaaceyno dhulkeenna “ayuu yiri Xildhibaan Jakoyo Midiwo.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Oryem Okello, ayaa sheegay in arrintan tahay mid Gobol islamarkaan Labada Dal ay ku wada jiraan Urur Goboleedka Bariga Afrika loona baahan yahay in si hoose loo xalliyo.
Wasiirka arrimaha dibadda Uganda Sam Kutesa, ayaa sheegay in arrinta Xudduuda iyo Muranka Jasiiraddaasi ay xallin doonaan Guddi isku dhaf ah oo ka socda Labada Dowladood,kaas oo la sameeyay 3 Sano ka hor.
12kii March 2009kii ayey Dowladda Uganda soo saartay war-murtiyeed ay ku sheegeyso in degaankaasi afti la geliyay ay muujisay in Dhulkaasi ay leedahay Uganda,sidaa darteedna aysan Kenya,waxaba ku lahayn marka laga reebo in uu Gumeysi u calaamadeeyay 1926kii.
13 kii March 2009kii ayey Wasiirro ka kala tirsan Labada Dowladood,waxaa ay ka kulmeen arrintan,waxaana ay isk afgarteen in Labada Kalluumeysto ee Kenya iyo Uganda loo ogolaado in ay wada jir uga Kalluumeystaan, inta looga heshiinayo muranka Sohdinta ee ka dhaxeeya Labada dal.
TOP NEWS: Dhageyso Wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha Diinta Galmudug oo ugu Baaqday Dhalinyarada ku jira Alshabaab ay isaga soo Baxaan
Qarax Weyn oo goordhaw gil gilay Bartamaha Magalada Istanbul ee Dalka Turkiga “Sawiro”
Maamulka Galmudug oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleed ka dhacay Galgaduud
admin 29th October 2015
DEG DEG: Dad Shacab ah oo lagu Laayay Duleedka Magaalada Muqdisho
Mohamed Abdirashid Abaajo 25th February 2019
Daawo: Mas’uuliyiinta puntland oo isku khilaafay go’aanka laga qaadanaayo kooxda Al-saadicuun bil-xaq
Tifaftiraha K24 27th April 2017